Digitaldị Dijitalụ Ise Na-ama Jijiji Europe | Martech Zone
Digitaldị Dijitalụ Ise Na-ama Jijiji Europe
Nnukwu data, ọtụtụ ọwa, mkpanaka na mgbasa ozi mmekọrịta na-emetụta omume ịzụrụ n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na infographic a lekwasịrị anya na Europe, ụwa ndị ọzọ adịghị iche. Nnukwu data na-enyere ndị na-eweta ecommerce aka ịkọ akparama agwa zụrụ ma na-enyere aka iweta onyinye ngwaahịa gafee ọwa - na-abawanye ọnụego ntụgharị na na-ewuli ndị ahịa.
Ihe nyocha McKinsey iConsumer mere Ọnọdụ 5 dị mkpa ejiji dijitalụ na e-commerce, mobile, multichannel, mgbasa ozi mmekọrịta, na nnukwu data.
N'ezie, akụkụ siri ike abụghị naanị otu ụlọ ọrụ si eji data buru ibu na otu ha si azụ ahịa na ntanetị, ọ na-agbakọ mmetụta nke ọwa ahịa ọ bụla na ịzụta zuru oke. Companieslọ ọrụ buru ibu na-eji amụma nchịkọta na-anakọta ọtụtụ data ma nye ha ohere ịghọta ihe mmụba ma ọ bụ ibelata n'otu ọrụ ọwa ga-enwe n'ofe dum. A ka nwere ụlọ ọrụ pere mpe nwere mmetụ mbụ, usoro mmetụ ikpeazụ nke nwere ike ọ gaghị enye nghọta na izi ezi nke ụzọ ndị ahịa ndị ahịa dị mgbagwoju anya na-ewere ugbu a.
Tags: nnukwu dataoriri dijitalụObodo BékèMcKinseyMcKinsey & Companylọ ọrụngwa ahiaotutu ọwaotutu ahia ahiaazụmahịa azụmahịa
Akpa Mmetụta, Aka Ikpeazụ, N’ikuku
Jun 2, 2013 na 8:38 AM
Inforgraphic dị oke mma, ekwenyere m na site na itinyekwu ego na sistemụ ịntanetị ma tinyekwuo data na weebụsaịtị, ndị ahịa na ahịa ga-abawanye